Waa Kuma Garsooraha Dhexdhexaadin Doono Kulanka Lugta Labaad Ee Real... - Wararka Maanta
Home/Warka Ciyaaraha/Waa kuma garsooraha dhexdhexaadin doono kulanka lugta Labaad ee Real…
Waa kuma garsooraha dhexdhexaadin doono kulanka lugta Labaad ee Real…
Garsooraha reer Holland Danny Makkelie ayaa dhexdhexaadin doono kulanka Real Madrid iyo Atalanta habeenka talaadada Waligiis ma uusan garsoorin labada koox midkood.
Caawiyaasha Makkelie waa Hessel Steegstra iyo Mario Diks. Kevin Blom ayaa mas’uul ka ah VAR, oo uu caawinayo Jochem Kamphuis. Allard Lindhout waa sarkaalka afraad.
Makkelie waligiis kama uusan noqon garsoore ciyaar ay dheelayaan Atalanta ama Real Madrid, laakiin wuxuu mas’uul ka ahaa labo kulan oo ay ciyaareen kooxaha Serie A xilli ciyaareedkan Champions League.
Waxa uu qalad galay kulankii Inter ay 3-2 kaga badiyeen kooxda Borussia Monchengladbach bishii Diseembar iyo guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Turin kulankii Barcelona bishii Oktoobar markii Merih Demiral uu casaan uu siiyey.
Waxa kale oo uu garsooray hal Champions League iyo hal ciyaar oo Europa League ah xilli ciyaareedkan iyo hal ciyaar oo ah Koobkii kooxaha Adduunka ee Club world cup sidoo kale sannadkan wuxuu garsooray semi-finalkii u dhexeeyay Palmeiras iyo Tigres.
Makkelie ayaa garsooray 28 kulan oo Champions League ah mustaqbalkiisa, 14 kulan oo Europa League ah iyo 240 kulan oo uu garsoore ka ahaa horyaalka Eredivisie.
Waxa uu muujiyay 1577 kaararka jaalaha ah 502 kulan oo uu garsoosay xirfadiisa, waxaana uu dhigay 160 rigoore Waxa uu casaan siiyay 73 ciyaartoy waxaana uu bixiyey qaatay 65 kaar oo casaan ah.
dhexdhexaadin doono garsooraha Kulanka Kuma labaad lugta Real Waa
Juventus Iyo Inter Milan Oo Isku Heystaan Sergej Milinkovic-Savic.
DEG DEG: Kenya oo Sabab Yaableh uga laabatay Dacwadii badda, Guusha Somalia &...
Xog: Qoor Qoor iyo Lafta-gareen oo diidan ka qeyb-galka shirka xarunta Xalane